Ukulungela Iintlekele Zendalo: Ngaphambili nasemva koko
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhuseleko loKhenketho noNgxamiseko » Ukulungela Iintlekele Zendalo: Ngaphambili nasemva koko
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Resorts • Safety • Tourism • Intetho yezoKhenketho • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Kunyaka ophelileyo, i-2020, yayingengunyaka wokuqala wobhubhane we-COVID-19, kodwa ikwabone ukunyuka kwezaqhwithi ezinkulu kunye nezinye iintlekele zendalo ezinje ngemililo yamahlathi kwihlabathi liphela.
Unyaka ka-2021 usifundise kwakhona ukuba izinto zihlala zihlala zisiba mbi. E-United States, i-New Orleans kunye needolophu ezininzi zokhenketho ezikufutshane neGulf Coast zonakaliswa yenye yezona nkanyamba zibi kakhulu emhlabeni.
Ngasentshona, umlilo wehlathi wavala iinxalenye zeLake Tahoe eyaziwayo kwihlabathi.
Amanye amacandelo ehlabathi nawo ahlupheka EYurophu iGrisi yabona ixesha layo elibi kakhulu lomlilo wehlathi, kwaye amazwe amaninzi aseYurophu aphathwa zizikhukula ezinzima.
Ezi ziganeko zemozulu kufanele ukuba zibe kukuvusa umnxeba kuwo wonke umntu okwishishini lokhenketho. Indalo kamama ikwenze kwacaca gca ukuba ukhenketho nokhenketho lushishino olubuthathaka kakhulu. Lushishino oluhlala luxhomekeke kwimozulu.
Rhoqo, uqoqosho lokhenketho kunye neenzuzo zikwimeko yeziganeko zendalo. Umzekelo, uMbindi Merika kunye neCaribbean zihlala zikwimeko yenkanyamba. Kwingingqi yePacific, olu lwandle lukhulu lubangelwe ziinkanyamba, ngokufanayo ziyabulala. Kwezinye iindawo zeli gama, kukho uyilo kunye nezikhukula, iinyikima kunye neetsunami kwaye ezi zinto zibizwa ngokuba ziintlekele zendalo zingenza umonakalo omkhulu kumzi-mveliso wokhenketho. Emva kwentlekele yendalo kuninzi kushishino lwezokhenketho, ukubuyela kwimeko yesiqhelo kuhamba kabuhlungu kwaye kunye namashishini ajongene nokushona kwabantu kunye nokuphulukana nemisebenzi. Ngenxa yobhubhane we-COVID-19 amashishini amaninzi akakwazi ukubuyela kwimeko yesiqhelo. Ngelishwa, asinakukwazi ukulawula imozulu okanye iimeko zemozulu, kodwa licebo elilungileyo ukulungiselela iinyikima, iinkanyamba neenkanyamba / iinkanyamba okanye imililo yehlathi ngaphambi kokuba zenzeke.
Ukukunceda ulungiselele ndinike ezi ngcebiso zilandelayo.
-Uphuhliso lwezicwangciso ngaphambi kweentlekele. Ukulinda kude kufike uqhwithela sele kusemva kwexesha ukuqala ukwenza. Yenza isicwangciso saphambi kwexesha likaxakeka. Esi sicwangciso kufuneka sijolise kumacala amaninzi kwaye kufuneka sibandakanye ukukhathalela abo banokwenzakala okanye abagulayo ngexesha lentlekele, ukufumana iindawo zokufihla iindwendwe, ukumisela ukuba ngubani na ongahlali kwiihotele, ukudala amaziko onxibelelwano.
Cinga ngesicwangciso seshishini sokubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye nesicwangciso sentengiso ngaphambi kokwehla kwentlekele. Nje ukuba uphakathi kwentlekele yendalo uya kuba uxakeke kakhulu ukuba uphuhlise iqula kuyo yonke inkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo. Thatha ixesha lokucwangcisa xa izinto zingenasiphithiphithi kwaye unomonde kunye nexesha lokunxibelelana nabanye abafana namasebe omlilo, amasebe amapolisa, amagosa ezempilo, kunye neengcali kulawulo olungxamisekileyo. Bazi aba bantu ngamagama kwaye uqiniseke ukuba bayakwazi ukuba ungubani.
-Yakha ubudlelwane obuhle bokusebenza phakathi kwamashishini abucala kunye neearhente zikarhulumente. Phambi kwentlekele, qiniseka ukuba uyazi amagama amagosa aseburhulumenteni onokuthi ubhenele kuwo. Yiya kwizicwangciso zakho naba bantu kwaye ufumane igalelo labo ngaphambi kwengxaki.
-Ungalibali ukuba iintlekele zihlala zingamathuba olwaphulo-mthetho. Qiniseka ukuba isebe lamapolisa liyinxalenye yesicwangciso sentlekele, hayi kuphela ngokwembono yokunyanzeliswa komthetho kodwa nakwimbono yobudlelwane boluntu kunye nokubuyiselwa kwezoqoqosho. Oko kuthethwa lisebe lakho lamapolisa kunye nendlela elisebenza ngayo kwiindwendwe kunokuchaphazela ukubuyela kwakho kunye nomzi mveliso wokhenketho lwengingqi kwiminyaka ezayo.
-Ukuphuhliswa konxibelelwano oluhle phakathi kweearhente zokuqala zokuphendula. Uninzi lweengcali zokhenketho zithatha nje ukuba kukho ubudlelwane obuhle bokusebenza phakathi kwe-arhente ezahlukeneyo zorhulumente, zikarhulumente, zephondo okanye zolawulo lwentlekele. Rhoqo akunjalo. Ukungahambelani ngokungxamisekileyo kubonakalisa kakubi ishishini lakho lokhenketho okanye uluntu. Umzekelo, Ngapha koko, uninzi lweearhente zamapolisa aziqeqeshelwanga ezobupolisa ezijolise kukhenketho kwaye azinalwazi lokuba zingajongana njani neemfuno ezizodwa zeshishini lokhenketho ngamaxesha obunzima.
-Uphuhliso lomgaqo-nkqubo wokujongana nolwazi oluhleliweyo. Umzekelo, kwimeko kaxakeka, ngaba iihotele ziya kusebenzisana ukuvumela amagama eendwendwe ukuba akhululwe? Ukuba kunjalo, phantsi kwaziphi iimeko? Iirekhodi zezempilo kufuneka zikhutshwe nini kwaye luyintoni uxanduva loshishino lwezokhenketho lwasekhaya ngokubhekisele kwimfihlo ngokuchasene nemicimbi yezempilo yoluntu?
-Ukuphucula iinkqubo zokukhuseleka kwezokhuseleko. Ngamaxesha entlekele, kunokufuneka zonke iintlobo zokuvunyelwa ngokusemthethweni. Nje ukuba le ntlekele yenzekile, sele kusebusuku kakhulu ukuqala ukulungisa imiba yezomthetho. Phuhlisa uluhlu ngoku kwaye ufumane ukucocwa okuyimfuneko ngexesha lokuzola. Ngendlela efanayo, hamba nabantu bakho bempilo yoluntu ukuba yeyiphi imigaqo-nkqubo eyakubakho ukuba umgaqo-nkqubo wesithathu kufuneka uphunyezwe.
-Kweli hlabathi liqhubekayo lobhubhane, kubalulekile ukuba iiarhente zokhenketho zengingqi ziphuhlise imigaqo-nkqubo yezempilo yabakhenkethi kwaye bazazise. Kwimeko yezikhukula, iinyikima okanye ezinye iintlekele zemvelo zonke iintlobo zeengxaki ezinokuvela. Iindwendwe zisenokuba ziphulukene namayeza kwaye azabinakho ukufumana ezokutshintsha, abanye abantu banokungafuni ukuba iingxaki ezithile zonyango zibeyinxalenye yerekhodi yoluntu. Iindwendwe ziya kuba namanqanaba aphezulu oxinzelelo kunokuba bezisekhaya kwaye sinokulindela ukubona amanqanaba amakhulu eengxaki ezibangelwa luxinzelelo lwezonyango.
-Yazi okanye ube nesicwangciso ukuba ishishini lakho lokhenketho ligubungela ingingqi okanye imimandla emininzi. Nanini na xa kunokwenzeka, phuhlisa ikhowudi yokuziphatha kunye nobudlelwane bokusebenza phakathi kweearhente, iihotele, iivenkile zokutyela, iindawo zokuhlala ezingxamisekileyo, kunye nezinye iiarhente zoncedo ezinqumla isixeko, isiphaluka, iphondo okanye imida yelizwe.
-Qiniseka ukuba unefowuni yasimahla okanye inkonzo ye-Intanethi kwaye ubhengeze apho iindwendwe zinokuya khona zisebenzise ezi nkonzo kwimeko zokucinywa kombane. Abaveleli baya kufuna ukubiza kwaye abo babathandayo baya kufuna ukubabiza. Ngokukhawuleza kunokwenzeka, misela uhlobo oluthile lonxibelelwano olukhululekileyo. Abatyeleli abanakuze basilibale esi senzo sokubuk 'iindwendwe.
-Qala iinkqubo zokuvuselela ukhenketho zexesha elide kwangoko. Ezi nkqubo zexesha elide kufuneka ziye ngaphaya kokuthengisa nje indawo okanye ukubonelela ngamaxabiso asezantsi. Le nkqubo kufuneka ibandakanye izinto ezinje ngokusebenza neengcali zempilo yengqondo kunye nokuseka izibonelelo zenkxaso kubakhenkethi abaza kuba ngamaxhoba. Xa undwendwe lushiya indawo echaphazelekayo, luza kuqhubeka nokuhlupheka ngenxa yentlekele yendalo. Fumana amagama, iidilesi ze-imeyile kunye neenombolo zomnxeba kwaye uqiniseke ukuba iindwendwe zakho zifumana iifowuni zokulandelela. Ezi fowuni akufuneki zithengise nantoni na ngaphandle kokuba iindwendwe zazi ukuba iarhente yakho iyabakhathalela.
Umbhali, uGqirha Peter E. Tarlow, ungusihlalo we-co Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi kwaye ikhokelela Ukhenketho olukhuselekileyo program.